Mpanamboatra sy mpamatsy volo fanapahana bolo vita tanana vita amin'ny tanana 5.0 Icool
Modely ： IC-50G
Size: 5.0 santimetatra
● Ity hety manao taovolo ity dia ataon'ny mpiasa za-draharaha. Noho izany, ny lelan'ity volo ity dia maranitra tokoa, na inona na inona volon'ny volo lava na volo fohy, dia tena marina sy marina ary haingana ny fanapahana.
● Ny mpiasanay mahay dia manana traikefa mihoatra ny 15 taona amin'ny fanaovana hety. Tsaboin'izy ireo tsara ny hety tsirairay, ary henjana tokoa ny sampana fanaraha-maso kalitaon'ny ozinina. Ny hety tsirairay dia miatrika fitsirihana kalitao mihoatra ny 6 alohan'ny fandefasana. Hamarino tsara fa tsy misy olana alohan'ny ahazoantsika antoka fa handefa ny vokatra amin'ny tanan'ny mpanjifa izahay.
● Ity gunting gunting natao ho an'ny mpanao volo matihanina ity dia mifanentana tsara amin'ny tanana, noho izany dia marina kokoa ny fanapahana ary avo kokoa ny fampiononana. Ny volom-borona dia mandray ny visy vatosoa nafarana, izay afaka manamboatra tsara ny lelan'ny hety ary manome toky fa mety tsara ny fanapahana mahitsy ny antsy. Ny hetsika sy ny fanitsiana an'ity fanapahana volo ity dia tena tsara, miaraka amin'ny fanoherana maharitra ary mampihena ny tabataban'ny fihetsiketsehana.
● Raha manana fanontaniana ianao amin'ny fizotranao misafidy hety dia aza misalasala mifandray aminay. Hivaly anao faran'izay haingana izahay.
Hety fanapahana volo misy visy firavaka
Teo aloha: Gun-bolo miolaka avo roa heny mihety hety
Manaraka: Gunting manety volo matihanina ambony